Ra'iisul Wasaare Rooble oo magacaabay guddi cusub soona saaay baaq culus - Caasimada Online
Home Warar Ra’iisul Wasaare Rooble oo magacaabay guddi cusub soona saaay baaq culus
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta magacaabay guddi heer Wasiirro ah oo u xilsaaran u gurmadidda dadka la il-daran abaaraha ka dhacay meel badan ee waddanka ah. Guddigan oo ka kooban 7 Wasaaradood ayaa kala;
1- Wasaaradda Gargaarka
3- Wasaaradda Qorshaynta
4- Wasaaradda Caafimaadka
5- Wasaaradda Beeraha
6- Wasaaradda Warfaafinta
7- Wasaaradda Biyaha
Ra’iisul Wasaaraha ayaa faray guddig in ay si deg-deg ah u howlgalaan oo ay daraasad dhab ah ku soo sameeyaan xaaladda dhabta ah.
Dhinaca kale, Rooble ayaa ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed in ay u istaagaan samatabixinta dadkeenna la dhibaateysan abaaraha.
Sidoo kale, Ra’iisul Wasaaraha ayaa kula dardaarmay ganacsatada Soomaaliyeed in ay maalgashadaan khayraadka ceegaaga dalkeenna, si uu kor ugu kaco waxsoosaarka dalka, loogana baxo saboolnimada iyo duruufaha nagu xeeran.
Rooble ayaa ka warbixiyey kobaca fursadaha maalgashi ee dalka iyo sida ay muhiimka u tahay in ganacsatadeennu ay u mideeyaan cududdooda iyo caqligooda oo aas-aas u ah horumarinta dhaqaalaha iyo shaqaaleynta dhallinyarada Soomaaliyeed.